Ukudalulwa Kwesimangalo eNew Jersey | Ummeli Wezokuvikela waseNew Jersey
Isimo sezulu Esingaziwa - I-NJ Ummeli wakho
Ikhaya / Isimo sezulu Esingaziwa - I-NJ Ummeli wakho
Musa ukubhekana ne-Foreclosure Litigation eNew York wedwa. Thola Ummeli Wezokuvikela Okumele waseNew Jersey Akusize.
Khuluma no Ummeli Wokucekelwa Kwentela eNew York namuhla nge MAHHALA. Noma ngabe ucabanga ukuthi awukwazi ukukhokhela ummeli wokufaka isimangalo sakho, khuluma nesinye NAMUHLA ngoba MAHHALA ukwenza izinketho zakho. Singahlala sikuhlelela ukuthi usebenze nomuntu obambela i-NJ Pro Bono Foreclosed Attorney uma ufanele.
AmaHhovisi Omthetho kaPatel noSoltis akusiza ukuvikela amalungelo akho. Sizinze eJersey City ngaphesheya kwe-Hudson County Courthouse. Sitholakala ngaphesheya kweWilliam J Brennan Courthouse okuyilapho Hudson County Surrogate itholakala.
Unelungelo Lokuthi Uphathwe Ngenhlonipho Noma ngabe uphoqelelwa ukuthi uye enkantolo mayelana nokuvezwa kwakho ngaphambili.
Singakuyeka ukuhlukumeza izingcingo futhi senze ukuthi ibhange lisebenzisane nathi kunokukuhlukumeza. Njengommeli wokuzivikela othembekile weNW Foreclosure, sisebenza ngokungakhathali egameni lamakhasimende ethu ukuqinisekisa ukuthi uphathwa kahle.
Sisindise amakhaya abantu lapho bebecabanga ukuthi bangaphandle kwezinketho. Siyayiqonda imithetho eyinkimbinkimbi ye-New Jersey ne-Federal nokuthi kudingani ukwenza le mithetho ikusebenzele esikhundleni sebhange. Uma unomuzwa wokuthi usuqanjiwe singumthombo wakho owodwa wokumiswa kweDoqo Lokuzivikela. Isimo sawo wonke umuntu sehlukile. Sizohlola zonke izinketho zakho zomthetho ukuthola ukuthi yini okukusebenzela kakhulu. Xhumana nathi namuhla ukuthola icala lamahhala.
Njenge-New Jersey Foreclosed Defense Firm, sinamathuluzi amaningi ku-arcane yethu yokulwela wena.
Ukulinganisa ukubeka ebhange lakho
Ukuthengisa Ikhaya Lakho (Kungaba yinani lemakethe noma ngokuthengisa okufushane.)
Cash okhiye (I-deed in Lieu)
Ukuthumela noma ukumisa ukuthengiswa okuhleliwe kweSheriff
Isahluko 7 Ukuqothuka
Sizoncoma kuphela izinketho zakho ezikusebenzela. Ungaphoqwa ukuthi uhambe ngendlela eyodwa ngumuntu ongakunikeza inketho eyodwa kuphela.
Singakuthola isikhathi esithe xaxa sokulwela ukonga ikhaya lakho. Ngokushesha lapho usithinta, ngokushesha sizoqala ukusebenzela wena.
Uma ubhekene nezikhathi ezinzima, kubalulekile ukukhuluma nommeli ongakusiza uqonde izinketho zakho ngalesi sikhathi esibucayi. Vikela impahla yenombolo yokuqala yomndeni wakho: Ikhaya Lakho. Xhumana nathi namuhla, futhi sizodlula konke ongakhetha kukho. Sithinte ku (844) 5 - DEFENSE - (973) 200-1111 noma usithumele i-imeyili ku [Email protected]